SOCDALKA DUNIDA | WWW.JUUNGAL.COM
Haweenka Madowga ah ah oo Qaati Bilaahi ka taagan Jaceylka ay u qadaan Raga Soomaaliyeed ee kunool Dalka….
Haweenka Madow ee u dhashay Dalka South Africa ayaa cabasho xoogan ka keenay Raga Soomaalida ee kunool Dalkaasi K/Afrika Gaar ahaan Raga ee Jaceylka u qaadaan .
Gabdho Badan oo South African ah ayaa Waxa ay ku doodeen in ay dhibaato xog badan ku qabaan Jaceylka ay u qaadaan Wiilasha Soomaalida ee Kunool Dalkaasi taas ay u sababeeyenm dhoor arimod oo ugu horeyso dhanka Luuqada.
Waxaa sidoo kale Haweynka South Africanka Cabashadooda kamid ah in Raga Soomaalida ay aad iskula weyn yihin ayna marnaba dooneyn in ay Jaceyl la wadaagaan Gabdhaha Madow ee South Africanka.
Andiswa Waa Gabar 19-Jir Kunool Tuulo katirsan Magaalada Cape Town Gabdhan ayaana waxaa lasoo darsay Jaceyl baaxad weyn ay u qaaday Wiil Somaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamad Ciise oo halkaasi gob ganacsi ku leh .
Gabadhan ayaan dhoor mar isku day day in Wilkaasi ay u bandhigto Jaceylka Baaxada weyn ee dilooday Nafteda balse waa ay ku guul daresatay dhoor mar ay isku day day arintaasi taas ay ugu Wacneed in Maxamad Ciise uusan Fahmen Luuqada ay u ku hadlaysay Gabadhaasi oo aheed Luuqada Khosaha .
intaas kadib ayaa gabadhi waxa ay isku dayday in ay Fariin Qoraaleed ku qoran Afka Ingilisha ay u Dirto Wilka ay jaceylka u qaaday Balse marki Wilka loo fasiray ayaa aad uga carooday hadalka kasoo yeeray Gabadhaasi South Africanka oo ah nuca lo yaqaan Xiiranta ama haweenka madow ee timaha yar leh.
Maxamad oo Careysan ayaana waxaa malintii danbe Dukaanka usoo gashay Gabadhi sida uu i xaqijiyay Wiil ay Saaxibo yihiin wilka arinta ku dhacaday ,Gabadhu waxa ay fileysay ayaa ahaa in uu soo dhaweyn doono ayna hadal farxad galiya u sheegi doono balse taa badalkeed Maxuu sameeyaya?
Wilki ayaa waxa uu sameeyay inta ul weyn soo qaatay ayuu garaacay una shegay hadi ay mar danbe Dukaankisa timaado in uu Dilo doono taas oo gabdhi ku beertay Guul daro iyo cabsi xoogan oo so wajahday maadaama ay ku guul dareesatay Jaceylkedi uuna u hanjabay.
Gabadhi ayaana ugu danbeyti ku catawday Caku Jaceyl aan laguu ogeyn iyo Qof aan Afkaaga kaseyn Jaceylka loo qaado Guul daro badanaa.
mana ahan Dhacdadi ugu horeysay ee Nuucaan ah oo gabdho South African ay ku guldarestaan Jaceylka ay u qaadaan Wiilasha Soomaalida ah ee Kunool Dalkaasi Walow ay jiraan Rag gursaday Hawenka Dalkaasi akdib Jaceyl Dhaxmaray.
Waa Su'aal Qof aadan afkisa garaneyn hadii aad Jeclaato side baad ugu shegi laheyd ?aan u daayo Su'aashaasi Aqristayaashena Sharafta leh.
Gabar 10 Sano Jirta oo Canug Dhashay Arin lala yaabay (Daawo)
Allaha u naxariistee waxaa Muqdisho ku geeriyootay marxuumad Faadumo Barrow Max’uud oo dhowaan keli loogala baxay Isbitaalka Banaadir
Allaha u naxariistee waxaa maanta duhurnimadii magaalada Muqdisho ku geeriyootay marxuumad Faadumo Barrow Maxuud oo dhowaan mid ka mid ah dhaqaatiirta ajaaniibta ah ee ka howlgaleysay isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho uu keli kala baxay, xaaladeeda caafimaadna uga sii daray, xili ay suuxsaneyd oo uu qaliin kaga sameynayey nabar weyn oo caloosha uga yiilay muddo dheer kaasoo dhaqaatiirta Soomaaliyeed ay horey u sheegeen inaan dalka waxba looga qaban Karin.
Xaajiyo Aamino Caddow oo marxuumada eedo u aheyd ayaa sheegtay in geerideeda ay timid ka dib markii maalmihii ugu dambeeyey ay ka sii dareysay xaaladeeda caafimaad isla markaana uu bararay meelo badan oo jirkeeda ka mid ah, waxayna intaa ku dartay in ugu dambeyntii maanta duhurnimadii ay Faadumo ku xijabatay isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho oo mudooyinkanba ay jiiftay.
Marxuumad Faadumo Barrow Maxamuud oo 30 jir aheyd ayaan laheyn xubintii taranka ee haweenka, waxaana caloosha uga yiilay nabar weyn oo ay ku dhalatay ka dib markii halkii kaadida loogu talo galay la arkay iyadoo xiran markii ay dhalatay.
Ehelada marxuumada ayaa sheegay in horey loogu geeyey dhaqaatiir badan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayna u sheegeen in xaaladeeda dalka gudihiisa aan waxba looga qaban Karin, waxayna intaa ku dareen in dhowaan ay tagtay isbitaalka Banaadir si ay xaaladeeda caafimaad uga caawiyaan dhaqaatiirta ajaaniibta ah ee dhowaan dalka yimid.
Mid ka mid ah dhaqaatiirta ajaaniibta ahaa ee dhowaan ka howlgalayey isbitaalkaas una dhashay dalka Masar ayaa waxaa la sheegay in isagoo aan baaritaan dheer ku sameynin nabarka marxuumad faadumo ku yiilay uu u sheegay inuu qaliin ku sameyn doono nabarkeeda waxna ka qaban doono, taasoo rajo ku abuurtay Faadumo.
Faadumo ayaa markii qaliinka lagu sameeyey xaaladeedu ka sii dartay, waxaana caloosheeda ka muuqda dhaawacyo waaweyn oo uu ku reebay qaliinkii lagu sameeyey kaasoo qaatay Infection cusub, iyadoo kaadida oo halka la qalay ka soo burqaneysana ay xaaladeeda ka dhigtay mid murugo leh oo aan indhaha loo dhameyn karin.
Ehelada Faadumo ayaa ku eedeeyey Dhaqtarkii masriga ahaa ee qaliinka ku sameeyey gabadhooda iyo kuwo Soomaali ah oo la joogay iney keli kala baxeen taasoo ay sheegeen in lagu ogaaday raajiyo la saaray qaliinka ka dib taasoo uu aqriyey Dr. Bigmey oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyed oo aqrinta raajada ku taqasusay kaasoo sheegay in faadumo ay ka maqan tahay keli ka mid ah labaadeeda keli, mida kalena ay jiran tahay oo uu dhagax ku jiro, nabarkii caloosha uga yiilay ee qaliinka looga sameeyeyna uu isku dhex furmay dhamaantii.
Ma jiro war ku saabsan arintan oo si toos ah uga soo baxay maamulka isbitaalka banaadir iyo wasaarada caafimaadka ee dowlada KMG Somalia oo la gaarsiiyey qoraal arintan ku saabsan hase ahaatee Qaar ka mid ah dhaqaatiirta Isbitaalka Banaadir ayaa Ehelada Faadumo u sheegay iney ka xun yihiin waxa dhacay laguna fududaaday qaliinkaas ayna wax u qaban doonaan gabadhooda hase ahaatee ehelada marxuumada ayaa sheegay inaaney jirin wax loo qabtay.
“Waxaan ka codsaneynaa in madaxda dowlada KMG ah Somalia iney dabagal ku sameeyaan dhaqtarkaas masriga ee kelida kala baxay gabadheena sharcigaa la horkeeno si ciqaabtiisa lo mariyo maskiinta iyadoo awalba dhibaneyd ayuu keli ka xaday” sidaa waxaa tiri Safiyo Cumar oo ka mid ah ehelada marxuumad Faadumo barrow Maxamud oo ilmo badan ay ku soo fadhiisteen indhaheeda.
Marxuumad Faadumo Barrow Maxauud ayaa 3 sano ka hor waxaa laga keenay miyiga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ka dib markii ay u adkeysan weysay xaalada ay ku sugneyd, waxaana magaalada Muqdisho ay u soo doonatay daweyn iyo qaliimo si xaaladeeda caafimaad wax looga qabto.
Marxuumada ayaa sheegtay intii ay nooleyd inuu dhibaato ku hayo nabarkaan ay ku dhalatay ee caloosha kaga yaala waxayna sheegtay in kaadida iyo caadadu ay marin ka dhigteen, ayna yihiin kuwo xili kasta iska socoto ayna ku celin jirtay baco iyo waxyaabo kale kuwaasoo ay sheegtay in dhibaato badan ku qabtay.